VIDEO-Lafta-gareen oo Baydhabo Kaga Dhawaaqay Xog Ku Saabsan Shirkii Garoowe iyo Madaxweyne Denni oo Fashilka Dusha…
May 15, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 1
Puntlandnews.ney (Garoowe)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkii madaxda Soomaaliya ee uu kaga qaybgalay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland.
Cabdicasiis Lafta-gareen madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa si lamid ah madaxdii hore shaaciyey in aan wax heshiis ah lagu gaarin shirkii madaxda DFS iyo dowlad goboleedyadu ku yeesheen magaalada Garoowe.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Denni oo warbaahinta kula hadlay Garoowe ayaa sheegay in natiijo la’aanta shirka ay gundhig u ahaayeen laba qodob oo ay ka gaabsatay dowladda federalka ah ee Soomaaliya iyo qodobo kale oo soo ifbaxay mudadii uu shirku socdey kana yimid dhanka xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya.
1-In madaxda heer federal iyo dowlad goboleedyadu aysan ku heshiin tubtii lagu wada shaqayn lahaa, maadaama ay u baahnayd waqti dheeraad ah waxaana kahortimid DFS oo dalbatay in waqti la siiyo.
2-In dowladda federalka ah ee Soomaaliya ay ku qanci wayday in dib loo soo celiyo shuruucda ku saabsan qaybsiga Khayraadka iyo arrimaha doorashooyinka dalka si wadatashi loogala sameeyo dowladaha xubnaha ka ah DFS.
HALKAAN RIIX SI AAD U DAAWATO QODOBADA
Erayga “qaybsi” si aan sax ahayn baa arkay iyadoo marar badan loo isticmaalayo oo loo tarjumayi “resource sharing iyo power sharing” khayraad qaybsi iyo awood gaybsi. Tarjumaadda habboon waa “khayraad wadaag iyo awood wadaag”. Dad wax qaybsaday ninba intiisa siduu doono ayuu u maamulanayaa uguna takrifalanayaao, laakiin dad wax wadaagay waxbaa isugu jira oo sidii loogu takrifalanlahaa ayeey ka wada tashanayaan oo go’aansanayaan marba sidii habbon.